विश्वकै अनौठो स्कुल जहाँ होमवर्क र क्लासवर्कमा पनि सेक्स गर्न सिकाइन्छ - Enepal Serofero
विश्वकै अनौठो स्कुल जहाँ होमवर्क र क्लासवर्कमा पनि सेक्स गर्न सिकाइन्छ
एजेन्सी । अस्ट्रियाको राजधानी भियना नजिकै एउटा यस्तो स्कुल छ । जहाँ विद्यार्थीहरुलाई ब्यबहारिक रुपमै सेक्स गर्न सिकाइन्छ । बिगत केही बर्षदेखी चल्दै आइरहेको उक्त स्कुलको नाम ‘भियना सेक्स स्कुल’ हो । स्कुलका अनुसार यो सेक्स स्कुलमा विद्यार्थी भर्ना गरी उनीहरुलाई सेक्सका बारेमा व्यवहारिक शिक्षा प्रदान गरिन्छ । यहाँ ब्यबहारिक रुपमै सेक्स सिकाइने दावी गरिएको छ ।
उक्त विद्यालयमा गृहकार्य समेत सेक्स नै हुन्छ । यो स्कुलमा पढ्नका लागि एक सत्रको १४ सय बेलायती पाउण्ड भर्ना शुल्क लाग्छ । यो भनेको लगभग दुइ लाख रुपैयाँ जति हो । युवायुवतीले मात्र पढ्नका लागि भर्ना हुन पाउने व्यवस्था छ । यो स्कुलमा छात्र छात्राको छुट्टाछुट्टै छात्राबास छैन । एउटै होस्टेलमा, अझ भनौं एउटै कोठामा पनि केटाकेटी बस्न पाउने सुविधा छ । समाचारपत्रमा खबर छ ।
यसो गर्नुको खास कारण भनेको विद्यालयमा पढाइने यौन सम्बन्धी पाठहरु उनीहरुले कोठामा गएर व्यवहारिक रुपमा प्रयोग गर्न सकुन् भन्ने नै हो । अस्ट्रियन इन्टरनेसनल सेक्स स्कुल यो स्कुलको नाम हो । स्कुलकी संस्थापक तथा प्राचार्य एल्वा मारिया थम्पसनका अनुसार विद्यालयको मूल उदेश्य भनेकै युवा युवतीलाई असल प्रेमी बनाउन सिकाउनु हो । – From : taja khabar
व्रतका बेला यौनसम्पर्क राख्नु उचित हो ? जानी राखौ,
नेपालमै सफल भयाे यस्ताे अप्रेसन कृत्रिम याेनीसहित पाेखराकी यी युवती पाईन नयाँ जीवन
Posted in रोचक खबर
Prevसुन्दरतामा कुनै मोडल भन्दा कम छैनन् यि २५ वर्षे इन्जिनियर, जसले सजिलै कमाउँछिन् डेढ करोड बढी
Nextसानो छाप्रोमा बस्ने अशोक अनि अशोकका परिवार एकाएक महल जस्तो घरमा बस्दा अशोक र परिवारलाई पहिलो अनुभव यस्तो भएछ (भिडियो)
विदेशमा रहेका श्रीमानसंग सेक्स भिडियो कल गर्दै धादिंगकी १८ बर्षिय युवती.लिक भएको क्लिप (14,841)
मगर्नी भाउजूको कथा (12,387)
वाइन पिउँदै भाउजु संग बितायाको त्यो रात (11,274)
राजधानीमा अचम्मको बलात्कार – सुन्दा तपाइको होस् उड्छ! (10,009)
जात अनुसार नाक आँखा र फेस फरक भएझै के जात अनुसार महिलाको योनी पनि भिन्न भिन्न हुन्छ ? (8,527)
धादिङको मलेखुबाट नाइट बसमा किचकन्या चढेपछी हंगामा (हेर्नुहोस भिडियो) (8,409)
भोलि माघ १० गते बिहिबार, तपाईको दिन कस्तो रहला ? हेर्नुहोस् भोलिको राशिफल !